နောက်ဆုံး Version 30.0 မှာ “Type” mode ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Instagram – AsiaApps
နောက်ဆုံး Version 30.0 မှာ “Type” mode ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Instagram
February 5, 2018 February 5, 2018 MoonApp NewsNo Comment on နောက်ဆုံး Version 30.0 မှာ “Type” mode ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Instagram
အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို ဝေမျှလို့ရပြီး နာမည်ကြီး social media app ဖြစ်တဲ့ Instagram ရဲ့ story မှာ “Type” mode အသုံးပြုလို့ရပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရင်က Instagram မှာ story တင်ရင် ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေပဲ ဝေမျှလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေကို စာသားဖြစ် ဝေမျှပေးလို့ရပြီဆိုတော့ Instagram က အရမ်းကို အသုံးပြုလို့ကောင်းနေပါပြီနော်။
When you open the camera, you’ll see “Type” next to “Normal” under the record button. Tap “Type” and write whatever comes to mind — your favorite lyrics,asilly thought orarandom idea — and play with different styles to change the look and feel. Then, you can pick different background colors, highlight words and phrases or addabackground photo.
“Type” mode ကိုဘယ်လို သုံးကြမလဲ
အသုံးပြုပုံကတော့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ IG မှာ Camera ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ record ခလုတ်ရဲ့ အောက်ဘက်မှာ “Type” ကိုတွေ့ရမှာပါ။ “Type” ကို ရွေးချယ်ပြီးရင် screen ရဲ့ အလယ်မှာပေါ်လာမယ့် “tap to type” ကိုဖိလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထည့်ရေးလို့ရပါပြီ။ Facebook က my day လိုပဲ နောက်ခံ background ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “Type” mode ကို ‘modern’ mode, ‘Neon’ mode, ‘Typewriter’ mode နဲ့ ‘Strong’ mode ဆိုပြီး ပုံစံတစ်မျိုးဆီ ခွဲထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Instagram ဟာ လတ်တလောမှာ မတူညီတဲ့ update တွေခဏခဏ ပြုလုပ်နေတဲ့ အတွက် နောက်လည်း ဘယ်လို update တွေ ဖန်တီးဦးမလဲဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။ Android user ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ iOS user ပဲဖြစ်ဖြစ် version 30.0 မြှင့်ထားရင် IG ရဲ့ “Type” mode ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Moto Z2 Play ကို $150 အထိစျေးလျော့ရောင်းချနေတဲ့ Motorola!
iPhone7 , iPhone8 နှင့် iPhoneX တို့၏ ကွာခြားချက်များ